U-Nomad ucacisa amathandabuzo malunga nendlela yokutshintsha ibhetri ye-AirTag kunye neLeop Loop yayo | Ndisuka mac
UNomad uphendula imibuzo malunga nokuba ungayitshintsha njani ibhetri ye-AirTag ngeLeop Loop yayo
Kwiiveki ezidlulileyo sabona kwiwebhu enye yeefayile ze- izixhobo ezininzi uNomad anazo kwii-AirTags. Kule meko yi Isitshixo seqhosha lesikhumba esivumela ukuba sithwale isixhobo sethu sendawo esikuyo ngendlela entle naphi na.
Kulungile kubonakala ngathi emva kwesandla esihle semibuzo ebuzwe ngabasebenzisi malunga singayitshintsha njani ibhetri ye-AirTag ngale nto itshixwayo, inkampani ngokwayo yehla yasebenza yaza yakhupha ividiyo malunga nayo, ilula nyani.
Kule meko sinokuthi ukungathandabuzeki kufanelekile ukwenza i-Nomad isongezwe nge-3M itape enamacala amabini ngqo kwisixhobo, ke kuyinto eqhelekileyo ukuba abasebenzisi bazibuze ukuba susa ibhetri kwi-accessory xa igqityiwe okanye ufuna ngokuthe ngqo ukutshintsha i-accessory ye-AirTag. Ke masibukele ividiyo.
Njengoko ubona kule vidiyo, kulula kakhulu ukutshintsha ibhetri ngaphandle kokuvula iringi yesitshixo kwisixhobo se-locator. Kwelinye icala, unokwenza nokususa i-keychain ngqo ngokuzolula. Ngale ndlela, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba kunokwenzeka ukuba emva koko kuyafana kwaye ukuba sifuna ukuyibeka kwakhona. Kwelinye icala ungayibona loo nto ngokomgaqo Akunyanzelekanga ukuba ishiye intsalela yeglu Ukuba sikhetha ukusisusa ngokuthe ngqo, kwimeko yokuba emva kwethutyana ishiya uhlobo oluthile lweglu, inokucocwa ngokulula ngesiselo esincinci se-isopropyl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » UNomad uphendula imibuzo malunga nokuba ungayitshintsha njani ibhetri ye-AirTag ngeLeop Loop yayo
I-beta entsha yasekhaya yePod ilungisa iingxaki esele zikhona kwaye yongeza ukungaphumeleli
Iikhamera ze-1080p ziya kufikelela kuzo zonke iiMacs